2 Apr 2018 . 3:52 PM
အားကစားဆိုတာက အနိုင်၊ အရှုံးဆိုတာ ဒွန်တွဲနေစမြဲပါ။ ဒါပေမယ့် ကြေးစားသက်တမ်းမှာ ရှုံးပွဲမရှိဘဲ အနိုင်ရလဒ်တွေကို ဆက်ထိန်းဖို့ဆိုတာ သာမန်လက်ဝှေ့သမားတွေအတွက် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မရှုံးဖူးတဲ့ လက်ဝှေ့ကျော်တွေက အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝှေ့သမိုင်းမှာ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ (၁၅) ဦးအထိ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ဂန္တဝင်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ လက်ဝှေ့ကျော် (၆) ဦးရဲ့အကြောင်းကိုပဲ ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Laszlo Papp
၁၉၂၆ခုနှစ် မတ်လ (၂၅) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသား ‘Laszlo Papp’ ဟာ သက်တမ်းတစ်လျှောက် (၂၇) ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ (၂၇) ပွဲအနိုင်ရကာ (၂) ပွဲ သရေကျခဲ့ပါတယ်။ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ (၂၇) ပွဲအနက် (၁၅) ပွဲက အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း (Middleweight) မှာ ကစားခဲ့ပြီး ၅ပေ၅လက်မသာ ရှိပေမယ့် သူ့ထက်အရပ်မြင့်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကိုတောင် အလဲထိုးနိုင်ခဲ့သူပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာကြေးစားအဖွဲ့က သူ့ကို ထိုးသတ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ သူဟာ သြစတီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့ကို သွားပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီခေတ်အခါက ပြိုင်ဘက်အလီလီကို အနိုင်ယူခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံအတွက် ထိုးသတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဟာ သူ့ကို ဗီဇာမပေးတဲ့အတွက် သူ့အနာဂတ်မှေးမှိန်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ၁၉၄၈ အိုလံပစ်၊ ၁၉၅၂ အိုလံပစ်နဲ့ ၁၉၅၆ အိုလံပစ်ပွဲတွေမှာ နိုင်ငံအတွက် ရွှေတံဆိပ်ရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Edwin Valero
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား ‘Edwin Valero’ ကလည်း ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တဲ့ လက်ဝှေ့ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ WBA ရဲ့ စူပါဖယ်သာဝိတ်တန်း (Super Featherweight) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်သလို WBC ရဲ့လိုက်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉၈၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့သူဟာ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ဧပြီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ (၂၈) နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ သူ့ရဲ့ကြေးစားဘဝကို ၂ဝဝ၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉) ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက သူဟာ အသက် (၂ဝ) စွန်းစွန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပြိုင်ပွဲစုံ (၂၇) ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီး အကုန်လုံးက အလဲထိုးနိုင်ပွဲချည်းပါ။ လက်ဝှေ့ပွဲတွေမှာ အားပါတဲ့လက်သီးတွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကို လှဲသိပ်ခဲ့တဲ့ ‘Edwin Valero’ ဟာ လူမှုဘဝမှာလည်း လက်မြန်လှသူပါ။ သူဟာ သူ့အမေနဲ့ အမကြီးတွေတောင် ထိုးခဲ့တယ်လို့ နာမည်ကြီးသူပါ။ ၂ဝ၁ဝခုနှစ်မှာ သူ့မိန်းမကိုိ သတ်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က သံသယရှိတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးရာကနေ သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားပါတယ်။
(၄) Joe Calzaghe
ဝေးလ်နိုင်ငံသား ‘Joe Calzaghe’ ကိုလည်း ဒီစာရင်းထဲမှာ ချန်ခဲ့လို့ မရပြန်ပါဘူး။ သူဟာ WBA (Super) ၊ WBC ၊ WBO နဲ့ IBF အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စူပါမစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း (Super Middleweight) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်သလို Ring Magazine ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း (Light Heavyweight) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလည်း ဖြစ်သူပါ။ သူဟာ WBO ရဲ့ စူပါမစ်ဒယ်ဝိတ်ခါးပတ်ကို သက်တမ်းအရှည်ဆုံး (၁ဝ နှစ်) သိမ်းပိုက်နိုင်သူဖြစ်ပြီး (၂၁) ကြိမ်အထိ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြေးစားဘဝမှာ (၄၆) ပွဲထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲ (၃၂) ပွဲက အလဲထိုးအနိုင်ရခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၂ခုနှစ် မတ်လ (၂၃) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ ‘Joe Calzaghe’ ဟာ ကြေးစားဘဝကို ၁၉၉၃ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၈ခုနှစ်မှာ အနားယူခဲ့ပါတယ်။
(၃) Ricardo López
မက္ကဆီကို နိုင်ငံသား ‘Ricardo López’ ဟာ Lineal Championship ၊ WBO ၊ WBC နဲ့ WBA တို့ရဲ့ စထရောဝိတ် (Strawweight) ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး IBF ရဲ့ လိုက်ဖလိုင်းဝိတ် (Light Flyweight) ချန်ပီယံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ‘Ricardo López’ ဟာ ၁၉၈၅ခုနှစ် (အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်) မှာ ကြေးစားဘဝကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားသက်တမ်းတစ်လျှောက် (၅၂) ပွဲ ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး (၅၁) ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့ကာ တစ်ပွဲသာ သရေကျခဲ့ပါတယ်။ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ (၅၁) ပွဲမှာလည်း (၃၈) ပွဲက အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ WBC ရဲ့ စထရောဝိတ်ခါးပတ်ကို (၂၁) ကြိမ်အထိ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝဝ၁ခုနှစ်မှာ ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူခဲ့ပြီး ဘောက်ဆင်အသံလွှင့်ဌာနမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
(၂) Floyd Mayweather
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ‘Floyd Mayweather’ ကတော့ စူပါဖယ်သာဝိတ် (Super Featherweight) ၊ လိုက်ဝိတ် (Lightweight) ၊ လိုက်ဝယ်တာဝိတ် (Light Welterweight) ၊ ဝယ်တာဝိတ် (Welterweight) နဲ့ လိုက်မစ်ဒယ်ဝိတ် (Light Middleweight) စတဲ့ ဝိတ်တန်း (၅) ခုရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ ကြေးစားကစားသမားဘဝကို ၁၉၉၆ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ပွဲစဉ် (၅ဝ) ထိုးသတ်ရာမှာ ရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ပွဲ (၅ဝ) အနက်မှ (၂၇) ပွဲဟာ အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့မှာ ‘Conor McGregor’ ကို အလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပြီး အနားယူပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
(၁) Rocky Marciano
ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် (၄၉) ပွဲ ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ယူထားတဲ့ ‘Rocky Marciano’ ကိုတော့ နံပါတ် (၁) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ (၄၉) ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကို ‘Floyd Mayweather’ က ၂ဝ၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့မှာ ‘Conor McGregor’ ကို အလဲထိုးပြီး ချိုးဖျက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ‘Floyd Mayweather’ ရဲ့နိုင်ပွဲတချို့ (ဥပမာ – Manny Pacquiao နဲ့ပွဲ) ဟာ အငြင်းပွာစရာရှိတာကြောင့် နံပါတ် (၂) မှာပဲ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။
‘Rocky Marciano’ ဟာ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ (၄၉) ပွဲမှာ (၄၃) ပွဲက အလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၄၇ခုနှစ်ကနေ ၁၉၅၅ခုနှစ်အတွင်း ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ‘Rocky Marciano’ ရဲ့ပွဲတွေကို လူငယ်တွေ သိပ်မသိကြပေမယ့် ပွဲစဉ်တိုင်းကို အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ အနိုင်ယူခဲ့သူပါ။ ၁၉၂၃ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဂန္တဝင်လက်ဝှေ့သမားကြီးဟာ ၁၉၆၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ကဲ . . . အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေက သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ လက်ဝှေ့ကျော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း အကြိုက်ချင်းတူမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ရှုံးပှဲမရှိဖူးတဲ့ သမိုငျးဝငျလကျဝှကြေ့ျော (၆) ဦး
အားကစားဆိုတာက အနိုငျ၊ အရှုံးဆိုတာ ဒှနျတှဲနစေမွဲပါ။ ဒါပမေယျ့ ကွေးစားသကျတမျးမှာ ရှုံးပှဲမရှိဘဲ အနိုငျရလဒျတှကေို ဆကျထိနျးဖို့ဆိုတာ သာမနျလကျဝှသေ့မားတှအေတှကျ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မရှုံးဖူးတဲ့ လကျဝှကြေ့ျောတှကေ အမြားကွီးဖွဈပါတယျ။ လကျဝှသေ့မိုငျးမှာ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ (၁၅) ဦးအထိ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအထဲကမှ ဂန်တဝငျလို့ သတျမှတျနိုငျတဲ့ လကျဝှကြေ့ျော (၆) ဦးရဲ့အကွောငျးကိုပဲ ဖျောပွသှားမှာဖွဈပါတယျ။
၁၉၂၆ခုနှဈ မတျလ (၂၅) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ ဟနျဂရေီနိုငျငံသား ‘Laszlo Papp’ ဟာ သကျတမျးတဈလြှောကျ (၂၇) ပှဲထိုးသတျခဲ့ပွီး ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ (၂၇) ပှဲအနိုငျရကာ (၂) ပှဲ သရကေခြဲ့ပါတယျ။ အနိုငျရခဲ့တဲ့ (၂၇) ပှဲအနကျ (၁၅) ပှဲက အလဲထိုးနိုငျခဲ့တာပါ။ မဈဒယျဝိတျတနျး (Middleweight) မှာ ကစားခဲ့ပွီး ၅ပေ၅လကျမသာ ရှိပမေယျ့ သူ့ထကျအရပျမွငျ့တဲ့ ပွိုငျဘကျတှကေိုတောငျ အလဲထိုးနိုငျခဲ့သူပါ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ဟနျဂရေီနိုငျငံဟာ ကှနျမွူနဈနိုငျငံဖွဈတဲ့အတှကျ နိုငျငံတကာကွေးစားအဖှဲ့က သူ့ကို ထိုးသတျခှငျ့မပွုပါဘူး။ သူဟာ သွစတီးယားနိုငျငံ ဗီယငျနာမွို့ကို သှားပွီး လကေ့ငျြ့ခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီခတျေအခါက ပွိုငျဘကျအလီလီကို အနိုငျယူခဲ့ပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံအတှကျ ထိုးသတျခှငျ့ရတဲ့အခြိနျမှ ဟနျဂရေီနိုငျငံဟာ သူ့ကို ဗီဇာမပေးတဲ့အတှကျ သူ့အနာဂတျမှေးမှိနျခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ ၁၉၄၈ အိုလံပဈ၊ ၁၉၅၂ အိုလံပဈနဲ့ ၁၉၅၆ အိုလံပဈပှဲတှမှော နိုငျငံအတှကျ ရှတေံဆိပျရအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ဗငျနီဇှဲလားနိုငျငံသား ‘Edwin Valero’ ကလညျး ရှုံးပှဲမရှိခဲ့တဲ့ လကျဝှခေ့နျြပီယံဖွဈပါတယျ။ သူဟာ WBA ရဲ့ စူပါဖယျသာဝိတျတနျး (Super Featherweight) ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈသလို WBC ရဲ့လိုကျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁၉၈၁ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၃) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့သူဟာ ၂ဝ၁ဝခုနှဈ ဧပွီလ (၁၉) ရကျနမှေ့ာ (၂၈) နှဈအရှယျမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ ဖွဈပုံက ဒီလိုပါ။ သူ့ရဲ့ကွေးစားဘဝကို ၂ဝဝ၂ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၉) ရကျနမှေ့ာ စတငျခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက သူဟာ အသကျ (၂ဝ) စှနျးစှနျးပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ပွိုငျပှဲစုံ (၂၇) ပှဲထိုးသတျခဲ့ပွီး အကုနျလုံးက အလဲထိုးနိုငျပှဲခညျြးပါ။ လကျဝှပှေဲ့တှမှော အားပါတဲ့လကျသီးတှနေဲ့ ပွိုငျဘကျတှကေို လှဲသိပျခဲ့တဲ့ ‘Edwin Valero’ ဟာ လူမှုဘဝမှာလညျး လကျမွနျလှသူပါ။ သူဟာ သူ့အမနေဲ့ အမကွီးတှတေောငျ ထိုးခဲ့တယျလို့ နာမညျကွီးသူပါ။ ၂ဝ၁ဝခုနှဈမှာ သူ့မိနျးမကို သတျတယျလို့ ရဲတပျဖှဲ့က သံသယရှိတဲ့အတှကျ ဖမျးဆီးရာကနေ သူဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသသှေားပါတယျ။
ဝေးလျနိုငျငံသား ‘Joe Calzaghe’ ကိုလညျး ဒီစာရငျးထဲမှာ ခနျြခဲ့လို့ မရပွနျပါဘူး။ သူဟာ WBA (Super) ၊ WBC ၊ WBO နဲ့ IBF အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ စူပါမဈဒယျဝိတျတနျး (Super Middleweight) ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈသလို Ring Magazine ရဲ့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျတနျး (Light Heavyweight) ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလညျး ဖွဈသူပါ။ သူဟာ WBO ရဲ့ စူပါမဈဒယျဝိတျခါးပတျကို သကျတမျးအရှညျဆုံး (၁ဝ နှဈ) သိမျးပိုကျနိုငျသူဖွဈပွီး (၂၁) ကွိမျအထိ ကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကွေးစားဘဝမှာ (၄၆) ပှဲထိုးသတျခဲ့ပွီး ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘဲ (၃၂) ပှဲက အလဲထိုးအနိုငျရခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၇၂ခုနှဈ မတျလ (၂၃) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားတဲ့ ‘Joe Calzaghe’ ဟာ ကွေးစားဘဝကို ၁၉၉၃ခုနှဈမှာ စတငျခဲ့ပွီး ၂ဝဝ၈ခုနှဈမှာ အနားယူခဲ့ပါတယျ။
မက်ကဆီကို နိုငျငံသား ‘Ricardo López’ ဟာ Lineal Championship ၊ WBO ၊ WBC နဲ့ WBA တို့ရဲ့ စထရောဝိတျ (Strawweight) ခနျြပီယံဖွဈပွီး IBF ရဲ့ လိုကျဖလိုငျးဝိတျ (Light Flyweight) ခနျြပီယံလညျး ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၆၆ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၂၅) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ ‘Ricardo López’ ဟာ ၁၉၈၅ခုနှဈ (အသကျ ၁၈နှဈအရှယျ) မှာ ကွေးစားဘဝကို စတငျခဲ့ပါတယျ။ ကစားသမားသကျတမျးတဈလြှောကျ (၅၂) ပှဲ ထိုးသတျခဲ့ပွီး (၅၁) ပှဲအနိုငျရရှိခဲ့ကာ တဈပှဲသာ သရကေခြဲ့ပါတယျ။ အနိုငျရခဲ့တဲ့ (၅၁) ပှဲမှာလညျး (၃၈) ပှဲက အလဲထိုးနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ WBC ရဲ့ စထရောဝိတျခါးပတျကို (၂၁) ကွိမျအထိ ကာကှယျနိုငျခဲ့သူအဖွဈ မှတျတမျးတငျခဲ့ပါတယျ။ ၂ဝဝ၁ခုနှဈမှာ ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူခဲ့ပွီး ဘောကျဆငျအသံလှငျ့ဌာနမှာ အလုပျလုပျနပေါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံသား ‘Floyd Mayweather’ ကတော့ စူပါဖယျသာဝိတျ (Super Featherweight) ၊ လိုကျဝိတျ (Lightweight) ၊ လိုကျဝယျတာဝိတျ (Light Welterweight) ၊ ဝယျတာဝိတျ (Welterweight) နဲ့ လိုကျမဈဒယျဝိတျ (Light Middleweight) စတဲ့ ဝိတျတနျး (၅) ခုရဲ့ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈပါတယျ။ ကွေးစားကစားသမားဘဝကို ၁၉၉၆ခုနှဈမှာ စတငျခဲ့ပွီး ပှဲစဉျ (၅ဝ) ထိုးသတျရာမှာ ရာနှုနျးပွညျ့အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ နိုငျပှဲ (၅ဝ) အနကျမှ (၂၇) ပှဲဟာ အလဲထိုးနိုငျခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ သွဂုတျလ (၂၆) ရကျနမှေ့ာ ‘Conor McGregor’ ကို အလဲထိုးနိုငျခဲ့ပွီး အနားယူပွီဖွဈကွောငျး တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။
ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ (၄၉) ပှဲ ထိုးသတျခဲ့ပွီး ရာနှုနျးပွညျ့အနိုငျယူထားတဲ့ ‘Rocky Marciano’ ကိုတော့ နံပါတျ (၁) အဖွဈ သတျမှတျထားကွပါတယျ။ သူ့ရဲ့ (၄၉) ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျကို ‘Floyd Mayweather’ က ၂ဝ၁၇ခုနှဈ သွဂုတျလ (၂၆) ရကျနမှေ့ာ ‘Conor McGregor’ ကို အလဲထိုးပွီး ခြိုးဖကျြသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ‘Floyd Mayweather’ ရဲ့နိုငျပှဲတခြို့ (ဥပမာ – Manny Pacquiao နဲ့ပှဲ) ဟာ အငွငျးပှာစရာရှိတာကွောငျ့ နံပါတျ (၂) မှာပဲ သတျမှတျလိုကျတာပါ။
‘Rocky Marciano’ ဟာ အနိုငျယူခဲ့တဲ့ (၄၉) ပှဲမှာ (၄၃) ပှဲက အလဲထိုးနိုငျခဲ့တာပါ။ ၁၉၄၇ခုနှဈကနေ ၁၉၅၅ခုနှဈအတှငျး ထိုးသတျခဲ့တဲ့ ‘Rocky Marciano’ ရဲ့ပှဲတှကေို လူငယျတှေ သိပျမသိကွပမေယျ့ ပှဲစဉျတိုငျးကို အငွငျးပှားဖှယျမရှိ အနိုငျယူခဲ့သူပါ။ ၁၉၂၃ခုနှဈ စကျတငျဘာလ (၁) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ ဂန်တဝငျလကျဝှသေ့မားကွီးဟာ ၁၉၆၉ခုနှဈ သွဂုတျလ (၃၁) ရကျနမှေ့ာ လယောဉျပကျြကခြဲ့ပွီး ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ ကဲ . . . အခုဖျောပွခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျလို့ရတဲ့ လကျဝှကြေ့ျောတှဖွေဈပါတယျ။ ပရိသတျတှနေဲ့လညျး အကွိုကျခငျြးတူမယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ။